စစ်သွေးကြွ AGNOSTICISM သည်ရှေ့သို့သွားသောလမ်းဖြစ်သည် - သတင်း
စစ်သွေးကြွ Agnosticism ရှေ့ဆက်လမ်းဖြစ်၏
ငါမသေချာမရေရာအတွက်အတော်လေးသေချာပါတယ်, ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တစ်နေရာရာမှာထွက်အဲဒီမှာနတ်ဘုရားရှိပါတယ်ရှိမရှိမသိရပါဘူး။ ငါဘုရားကိုယုံကြည်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုမစုဆောင်းနိုင်သော်လည်းငါသည်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုငြင်းပယ်ရန်မလိုပါ။ ငါအလုံအလောက်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ဖို့လမ်းရှိတယ်ထင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ငါကပွင့်လင်းထားခဲ့ပါ။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းဘာသာတရားနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ငါကပိုပြီးပြissuesနာတက်သည်။ ငါဘာသာတရားအဖြစ်ကောင်းစွာကမ္ဘာကြီးကိုအဘို့များစွာသောအံ့သြဖွယ်အမှုအရာပြုတော်မူပြီအထူးသဖြင့်အဖြစ်, ဤနက်ရှိုင်းသောသို့မသွားဘူး။
ဘာသာတရားရဲ့အားနည်းချက်ကိုဆုတောင်းပြီးဘာသာတရားဟာအလွန်အမင်းအသုံးချနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သို့သော်ထို့နောက်၎င်းသည်လိုအပ်သူများကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုသို့သောမျှော်လင့်ချက်ရှိရန်အကောင်းမြင်သူဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည် ev ၀ ံဂေလိတရားနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဒီကိစ္စကိုတကယ်တော့ငါယုံကြည်သောအရာကိုယုံကြည်ငါနှင့်အတူအတော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ သင်ယုံကြည်တာကိုယုံတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကွဲပြားနေပြီးမင်းရဲ့လမ်းကသာလွန်တယ်လို့မင်းကိုပြောပြီးမင်းပြောရင်ငါအရမ်းလွယ်လွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်ပဲ။ မင်းရဲ့ဥစ္စာကိုမင်းကိုသိမ်းထားပြီးမင်းကမင်းမှားတယ်လို့မင်းဘာကြောင့်ထင်လဲဆိုတာငါမပြောဘူး။
ငါဟာ Richard Dawkins လိုစစ်သွေးကြွဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေနဲ့ပြissuesနာများစွာရှိတယ်။ များစွာသောဘာသာရေးယုံကြည်သူများသည်သူတို့၏ကိုးကွယ်ရာအရှင်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းကဲ့သို့သောသူသည်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, theist / ဘုရားမဲ့ဝါဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံ၎င်း၏အဓိကအားမှာဘာသာတရား၏အကျိုးကျေးဇူးများပေမယ့်အနည်းဆုံးဘုရားတ ဦး တည်းအပေါ်ယုံကြည်ချက်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။
Canonical ဘာသာတရားများသည်များစွာသောကျွန်စနစ်၊ misogyny နှင့် homophobia များအပါအ ၀ င်ရှေးဟောင်းသုတေသနနိယာမများစွာကိုဤဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီပုံရသည်။ သို့သော်အချို့သောအမာခံဘုရားမဲ့ဝါဒီများကလူများ၏ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခြင်းကိုရှုတ်ချပြီးလှောင်ပြောင်ခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်ဟုထင်ကြသည်။
ငါအလယ်မှာထိုင်ဖို့ပိုနှစ်သက်။ ငါယုတ်ဖြစ်သို့မဟုတ်အခြားသူများချစ်လှစွာသောကိုင်သောအရာကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်ကြဘူး။ အလယ်၌ရပ်နေနှင့်အတူပြproblemနာလုပ်ဖို့အငြင်းအခုံနည်းနည်းနှင့်တွေ့ရှိရခံရဖို့အသိုင်းအဝိုင်းနည်းနည်းပါပဲ။
undecided ဖြစ်ခြင်းအတွက်အင်အားဘယ်မှာလဲ ယူနီဖောင်းဝတ်ခြင်းအတွက်မည်သူတိုက်ပွဲဝင်သနည်း။ အဘယ်သူသည်သတိရှိရှိဗဟိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး? နိုင်ငံရေးကို (မဲရုံများဖြင့် (ပိုလန်နိုင်ငံရှိ၊ ပိုလန်နိုင်ငံများမှ) မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး) မှငြင်းခုံခဲ့သည်။
ခြံစည်းရိုး OFF GET
ငါလှုပ်ရှားမှုစတင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူတစ် ဦး မိတ်ဆွေတစ် ဦး ရှိသည်ဘူး '' စစ်သွေးကြွ Agnosticism ။ 'သူကပဲသူကကြီးတွေလေ့လေ့အောင်မြင်မှုအများကြီးရှိပါတယ်မရှိသေးပေကျနော်တို့ကျိန်းသေမသိရပါဘူး! သူစိမ်းတွေနဲ့အငြင်းအခုန်များနှင့်အကောင်းဆုံးများအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ လူတွေကိုစင်တာ၊ လျစ်လျူရှုမှု၊ အသိစိတ်ရှိရှိမသိနားမလည်မှုတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၌ဂရိနှင့်ရောမတို့ကဲ့သို့သောများပြားလှသော ၀ ိညာဉ်ရေးယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့၏ဘုရားများသည်အလွန်လူသားများဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူဒေါသထွက်တတ်သည်၊ မနာလိုမှုများ၊ အမြဲတမ်းချိုသော (* ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဇုသ * ချောင်းဆိုးခြင်း) ။ သူတို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝေးကွာပေမယ့်လူတွေကလက်ခံကြတာပါ။ ပြီးတော့ပျော်စရာပွဲတော်တွေ၊
ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာတကယ့်ကိုလှပတဲ့အနုပညာများစွာကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရှိသကဲ့သို့, ကျေးဇူးတင်စရာ, အနုပညာထက်အသုံးဝင်သောအဖြစ်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်ပြီးနောက် '' ထွင်းကျောက်ပုံရိပ်။ ' အနုပညာပြခန်းများကို ပို၍ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းစေသည်၊